Waxyaabaha aasaasiga ah ee lagu meeleeyo qorshaha- ganacsigaaga | FXCC Blog
Aug 9 Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • 1230 Views Comments Off qaar ka mid waxyaabaha daruuri u ah in lagu meeleeyo qorshahaaga ganacsi
Markaad tahay ganacsade novice ah waxa had iyo jeer ku soo xusuusin doona kuna dhiirigelin doona la taliyayaashaada iyo ganacsatada kale si aad u abuurto qorshe ganacsi. Ma jiro qorshe la aqbali karo oo loogu talogalay qorshaha, in kasta oo ay jiraan qawaaniin guud ahaan loo tixgeliyo oo ganacsatada intooda badani ay isku raaci doonaan inay lagama maarmaan u yihiin in lagu daro qorshaha.
Qorshaha Ganacsiga waa inuu noqdaa mid aad u faahfaahsan oo sax ah oo daboolaya qayb kasta oo ka mid ah ganacsigaaga. Qorshuhu waa inuu noqdaa joornaalka 'aad' joornaalka oo had iyo jeer lagu daro oo dib loogu noqdo. Waxay noqon kartaa wax fudud oo macquul ah, ama waxay ka koobnaan kartaa xusuus qorka dhammaan howlaha ganacsigaaga, isla markaaba ganacsiga kasta oo aad qaadatid iyo shucuurta aad dareentay muddadii ganacsigaaga hore. Kahor intaadan tixgelin ganacsatada halkan waxaa ku yaal talo soo jeedinno dhowr ah oo kusaabsan waxa qorshahaagu ku jiri doono.
Deji sababahayaga ganacsiga; maxaad u ganacsanaysaa? Maxaad rajeyneysaa inaad ku guuleysato, Sidee dhakhso ah ayaad u rabtaa inaad ku guuleysato? U deji bartilmaameedka si aad u noqoto mid tayo leh kahor intaadan dejin bartilmaameedka si aad u noqoto mid faa iido ah. Waa inaad naftaada ku barataa dhinacyo badan oo ka mid ah ganacsigan aadka u adag ka hor intaadan bilaabin beegsiga koontada.
U deji u dulqaadashadaada halista labada shaqsi ee khasaare iyo isugeynta xisaabta
U dulqaadashada halista waxay noqon kartaa arin shaqsiyeed, hal ganacsade halista la aqbali karo waxay noqon kartaa anathema kale. Ganacsatada qaarkood waxay kaliya u diyaar garoobi doonaan khatarta halista xisaabta 0.1% halkii ganacsi, kuwa kale gabi ahaanba way ku raaxeysan doonaan khatarta 1 ilaa 2% ganacsigi kasta. Waxaad go'aan ka gaari kartaa halista aad ugu diyaar garowdid inaad u dulqaadato ka dib markaad suuqa gasho. La-taliyayaal badan ayaa tixraaca tijaabada timirta dhididka; heerkee halista ah ee aad isku aragto kor u kaca heerka garaaca wadnaha ama walwal marka aad meelayso ama kormeerid ganacsi?
Xisaabi halista aad ka ganacsan kari weydo
In kasta oo aad ku kicin karto koontadaada ugu horreysa lacag aan badnayn, waxaa jiri doona heer lumis, iyada oo ay ugu wacan tahay shuruudaha amaahda iyo shuruudaha goorta aadan ganacsi ka dhex dhici karin macmiilkaaga iyo xannibaadaha suuqa. Waa inaad sidoo kale u tixraacdaa maalgelinta akoonkaaga bilowga heerka keydkaaga. Tusaale ahaan, miyaad halis gelineysaa 10% kaydkaaga si aad isugu daydid inaad baratid sida loo ganacsado forex?
Qor oo falanqee dhammaan natiijooyinka gadaal ee xeeladaha aad tijaabisay
Waxaad ku tijaabin doontaa tilmaamayaal farsamo oo fara badan, waxaad sidoo kale tijaabin doontaa cluster badan oo tilmaamayaal ah. Tijaabooyinka qaar ayaa ka guuleysan doona kuwa kale. Diiwaangelinta natiijooyinka ayaa kaa caawin doona inaad dejiso nooca ganacsade ee aad noqon lahayd. Waxaad sidoo kale, iyada oo la marayo geedi socodka baabi'inta, go'aan ka gaari doontaa xeeladaha ugu habboon ee ku habboon noocyada ganacsiga kala duwan ee aad doorbidi karto.
Abuur liiska daawashadaada ganacsiga oo bilow inaad go aansato sababta aad u sameysay xulashooyinkaan
Waxaad ubaahantahay inaad go’aamiso waxa aaminka ah ee aad ka ganacsan doonto ka hor intaadan go’aansan inaad ku noolaato ganacsi. Waad hagaajin kartaa liiskan-daawashada waqti dambe, waad ku dari kartaa ama kala goyn kartaa taas oo kuxiran sida istaraatiijiyadiinu ushaqeynayo inta lagu jiro ganacsiga tooska ah kadib tijaabada. Waa inaad sameysataa haddii aad doorbideyso inaad ka ganacsato lammaaneyaasha waaweyn kaliya, ama waxaa laga yaabaa inaad horumariso istiraatiijiyad tilmaameed oo ah haddii ay calaamadaha digtoonaanta iyo isku dheellitirnaanta mid ka mid ah amnigaaga liiskaaga saacaddaha aad ganacsiga ku qaadan doonto.
Liis garee nuxurka mabda'a nidaamka ganacsigaaga macaashka ah
Waa muhiim inaad u jabiso istaraatiijiyaddaada guud dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay; nabadgeliyada aad ku ganacsan doontid, halista ganacsiga kasta, halista soo gelitaankaaga iyo bixidaada, khasaaraha maalinlaha goos goos ah iyo isku soo baxyada aad diyaar u tahay inaad dulqaadato ka hor intaadan tixgelin beddelida habkaaga iyo istiraatiijiyadda iwm.
« Waxyaabaha aasaasiga u ah in lagu dhigo qorshahaaga ganacsi Aqbalaada waxa aad xakamayn karto marka aad ka ganacsato FX wuxuu muhiim u yahay horumarkaaga »